ဒေါင်းဇာနည်: မေ-ဇွန် အလုပ်သမား အရေးအခင်း "ဆင်မလိုက် သင်္ဘောကျင်းတိုက်ပွဲ“
မေ-ဇွန် အလုပ်သမား အရေးအခင်း "ဆင်မလိုက် သင်္ဘောကျင်းတိုက်ပွဲ“
ကောင်စီအစည်းအဝေးကို အပတ်တိုင်း ထိုင်ရတယ်။ တက်ရောက်တဲ့သူတွေထဲမှာ ဦးချစ်ဦး၊ ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်၊ ကောင်စီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ နောက် ဌာနဆိုင်ရာ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေ.......
ဆင်မလိုက် သင်္ဘောကျင်းက ယူဂိုစလဗ်က အကူအညီပေးတာ၊ သိန်း ၆၅ဝ ကုန်ကျတယ်။ ယူဂိုစလဗ် အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ အတူ အလုပ် လုပ်ကြရတယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အနောက်ဂျာမဏီ လျှပ်စစ် ဆီးမင်း ကုမ္ပဏီရှိတယ်။ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စက်တွေက အရှေ့ဂျာမဏီ စက်တွေ။ စက်ရုံထဲမှာ သင်္ဘောလွန်းလမ်းတွေ၊ သင်္ဘောကို တနေရာက တနေရာကူးပြောင်းပေးတဲ့ Transmitter ရေကန်ကြီးတွေ၊ သင်္ဘော တည်ဆောက် ရေးစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေပေါင်းစုံ၊ ဌာနပေါင်းစုံ ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေ ဆိုတာကလဲ များသောအားဖြင့် ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်း သမားတွေ...... အလုပ်သမားပေါင်း ၁ဝဝဝ ခန့်ရှိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တန်ချိန် ၃ဝဝဝ ရှိတဲ့ မေယု သင်္ဘောက အစ ရန်မျိုးအောင် စစ်သင်္ဘော အထိ ကုန်းပေါ် တင်ကြရတယ်၊ Five Stars က ပြည်တော်ညွန့် သင်္ဘောလဲ တင်ရတာပဲ။ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်က အတတ်ပညာမြင့်တယ်။ တချို့ အလုပ်တွေက သိပ်ပင်ပန်းတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ စက်နဲ့ လုပ်ရမယ့် ဟာတွေကို လူအားနဲ့ လုပ်နေရလို့ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ... ဆိုပါတော့ တန်ဝက်လောက် လေးတဲ့ဟာ ဆိုရင် ချိန်းဘလောက်နဲ့ မ, ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် လူ ၄,၅ ယောက်နဲ့ မ, နေရတော့ လူတွေဟာ အကြော အခြင်တွေ ပြတ်ထွက်ကုန်ပြီလား ခံစားရတယ်။ နောက်- သင်္ဘောပန်ကာကြီးတွေ ဖြုတ်တဲ့ အခါ ၁၂ ပေါင် လေးတဲ့ တူကြီးနဲ့ တအား လွှဲ, လွှဲရိုက်ပြီး ဖြုတ်ကြရတာ၊ မေယု ပန်ကာ ဆိုရင် ၂တန်-၃တန် လောက် လေးတယ်။ အဲဒါကြီးကို ချိန်းဘလောက်နဲ့ ဖြုတ် တူနဲ့ ရိုက်ရတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ တပေါင်း တန်ခူး နေပူကြီးထဲမှာ၊ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပါ။ သင်္ဘောဝမ်းထဲ လေးဘက်ထောက်ဝင်ပြီး ရပစ် (Rivet) ရိုက်ရတဲ့ အခါမျိုးဆိုရင် သေချင်စော် နံတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရတဲ့ လခ ကျတော့ သိပ်နည်းတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကောင်စီက လူတွေဟာ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ရှိတဲ့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေကို မကြာမကြာ လေ့လာခွင့် ရပါတယ်။ ဘီပီအိုင်၊ ဂုံနီစက်ရုံ၊ သမိုင်း ချည်မျှင်နဲ့အထည်စက်ရုံ..... စသည် ရောက်ဖူးတယ်။ ဒီအပေါ်က ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမားတွေ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ နေထိုင် စားသောက်မှုဘဝ၊ အလုပ်ခွင် အခြေအနေ၊ လစာ၊ ထောက်ပံ့မှု၊ စောင့်ရှောက်မှု.... စသည်။ ထောင့်ပေါင်းစုံက ကြည့်ပါတယ်။
ဥပမာ... ဘီပီအိုင် (ဆေးဝါးစက်ရုံ) မှာဆိုရင် ကလေးထိန်းဌာန ရှိတယ်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်မှု မြင့်တယ်။ အခန်းထဲဝင်ရင် ဘိနပ်ချွတ်ဝင်၊ ပိုးသတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံတွေ လဲပြီးမှ ဝင်ရတာမျိုး။
လေ့လာရေးက ပြန်လာရင် ကောင်စီအစည်းအဝေး ထိုင်ရတယ်။ ထုတ်လုပ်ရေး ဘယ်လိုတိုးအောင် လုပ်ရမလဲ၊ ဆွေးနွေးကြတယ်။
ဒီနေရာမှာ မဆလခေတ် အရာရှိကြီးတွေနဲ့ သူတို့လည်ပတ်နေတဲ့ ယန္တားရားကြီး အကြောင်းကို မိမိနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အပိုင်းကနေပြီး ပြောပြချင်တယ်။
တယောက်က ဗိုလ်မှူးကြီး တင်စိုး- သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ ဦးသာကျော် ပြီးရင် သူပဲ။ သူက "ဒီမှာ ကိုဝင်းထိန်- ခင်ဗျား သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ဟာ အစိုးရ အကြီးတန်းအရာရှိ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး" တဲ့။
အဲဒီကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာပဲ ကျွန်တော်က "ထုတ်လုပ်ရေးမှာ M -၆ လုံးလို့ ပြောကြတယ်။ Man လူ၊ Machine ဆိုတဲ့ စက်ကရိယာ၊ Market ဈေးကွက်၊ Money ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံ၊ Method နည်းပညာနဲ့ Management ခေါ်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု။ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံမှာ ခေတ်မီဖို့ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမား အားလုံးကို အတတ်ပညာ မြှင့်ရမယ်။ စက်ရုံကို ခေတ်မီဖို့ M-၆ လုံးတပ်ဆင်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိပ်ပင်ပန်း နေတယ်။ လစာ ကနည်းတယ်။ အာဟာရ မလိုက်နိုင်၊ ခွန်အားမရှိ။ ခေတ်က မမီတော့ ကရိန်းနဲ့ လုပ်ရမယ့် ဟာကို လူတွေနဲ့ မ, နေရတယ်။ ဒါကြောင့် M ၆လုံး ကိစ္စ အမြန် စဉ်းစား ပေးကြပါ" လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ညွန့်အောင် ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူက ရန်လုံးအောင် စစ်ရေယာဉ်ရဲ့ C.O ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်နေဝင်း စာတိုက်ကြီး စာရေး လုပ်နေစဉ်က သူ့ကို ထိန်းပေးရတာ ဆိုတော့ ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်ဘူး။ သူ့ အထက်က ဗိုလ်ချုပ်သောင်းတင် လာရင်လဲ salute မပေးဘူး။ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GM (အထွေထွေ မန်နေဂျာ) က ဦးမျိုးခင် ဆိုတဲ့ ရခိုင် ကုလားကြီး၊ သူက စက်ရုံကို သိပ်ဖွံ့ဖြိုးချင်တယ်။ သိပ်တိုးတက်ချင်တယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘဝကို ကောင်းစေချင်တယ်။ ဒါကို သိတဲ့အခါ သူ့အထက်အရာရှိ- ဦးသာကျော်က "ဟေ့ မျိုးခင်" ဆိုပြီး 'ငါ' နဲ့ ကိုင်တုတ်တယ်။ ဦးသာကျော်ဟာ ရခိုင်တွေထဲမှာ ဘုရင်လို ဆက်ဆံတာ - တော်တော်များများက သူ့ကို ဘုရားမထူးရရုံ တမယ်ပဲ။
ရေတပ်ရဲ့ အထာက တမျိုး၊ ဗိုလ်တွေကို ထမင်းပို့ရတဲ့ AP တပ်သားတွေ ရှိသေးတယ်။ ထမင်းပို့တဲ့ အခါ သူတို့ မကြည်လို့ရှိရင် ထမင်းထဲ တံတွေး ထွေးထည့်ပေးလိုက်တာ- မိသွားတဲ့ အခါ ထိုးကြ ကြိတ်ကြ ဖြစ်ကြတယ်။
သူတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမားတွေ ယေဘုယျအားဖြင့် ခင်ကြတယ်။ အရာရှိရော တပ်သားတွေပါ ခင်ကြတယ်။ ဘဝ အရကို မခင်လို့ မဖြစ်ဘူး။ လူ ၂ဝဝ-၃ဝဝ လောက် စီးတဲ့ တန်ချိန် ၃ဝဝဝ လောက် ရှိတဲ့ စစ်သင်္ဘောကြီး ပင်လယ်ထဲ သွားတဲ့အခါ အလုပ်သမားတွေ လုပ်ပေးလိုက်တာ မသေသပ်ရင် လိုရာမရောက် သေရွာရောက်သွားနိုင်တယ်။ သင်္ဘော ဒေါက်ဆင်းရင် ကျွန်တော် လက်မှတ်ထိုးမှ ထွက်ခွင့်ရတာ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို အရေးပေးပါတယ်။
မေဒေးတို့ ပြည်ထောင်စုနေ့တို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သင်္ဘောကျင်း အလုပ်သမားတွေပဲ ထမနဲ ထိုးပေးရတယ်။ လူ ထောင်သောင်းအတွက် ထိုးပေးရတာပါ။ ကျွန်တော် အလုပ်သမားတွေနဲ့ အတူထိုး အတူစားနေခဲ့တယ်။ သင်္ဘောကျင်းမှာ စာကြည့်တိုက် ဖွင့်တယ်။ အတူဖတ်ကြ လေ့လာကြတယ်။ ဒီအလုပ်သမား တွေထဲမှာ ရုရှား၊ ပိုလန်၊ အရှေ့ဂျာမဏီ.... စတဲ့ ဆိုရှယ်လစ် နိုင်ငံတွေကို သွားပြီး ပညာသင်ခဲ့ရသူတွေ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုရှယ်လစ် စနစ်အပေါ် တိမ်းညွှတ်မှု ရှိကြတယ်။
အထက်မှာ ပြောခဲ့တာတွေဟာ အရေးအခင်း မပေါ်မီ နောက်ခံ အနေအထားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ ဌာနနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အရေးအခင်းအကြောင်း တင်ပြပါမယ်။
ဇွန်လ ၅-ရက်နေ့က စပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆင်မလိုက် သင်္ဘောကျင်းနဲ့ လှည်းတန်း မီးရထားလမ်းနဲ့က ကပ်နေတယ်။ ရန်ကုန်ဘက်က မီးရထားအလုပ်သမားတွေ အင်းစိန်ဘက် ချီတက်သွားကြပြီ ဆိုတဲ့သတင်း ကြားနေကြရပြီ။
၆-ရက်နေ့မှာ ထုံးစံအတိုင်း ဌာနကို အစောကြီးသွားတယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ ရေနွေးတည်၊ စာကြည့် တိုက်ဖွင့်၊ စက်ရုံ ဖွင့်ပေးပြီး ကဲန်တင်းထဲ သွားထိုင်ပြီး စောင့်နေတုန်း အလုပ်သမားတွေ ဝင်လာတယ်။
"ကိုဝင်းထိန် ဟိုမှာ မီးရထားမှာတော့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်နေပြီ။ ဘာလုပ်ကြမလဲ?" လို့ အလုပ်သမား ရဲဘော် ကိုဘာစိန်က မေးတယ်။
"သူတို့တောင် မှောက်ရင် ကျွန်တော်တို့လဲ မှောက် ပေါ့ æဗျာ။ ဒါ ကိစ္စ ကောင်းပဲ။" æ ဆိုပြီး လက်မြေ‡ာက်ပြလိုက်တယ်။ အလုပ်သမားတွေကလဲ အားလုံး လက်မြှောက်ပြလိုက်ကြကာ "ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သပိတ်မှောက်ကြမယ်။" လို့ ညှိလိုက်ကြတယ်။ ကဗျာကယာ ဆိုင်ထဲ စားသောက်ပြီး ထွက်လာ ကြတယ်။ ဆိုင်ရှေ့မှာ ကျွန်တော်က "သပိတ်- သပိတ်" တိုင်တာနဲ့ 'မှောက်၊ မှောက်' ဆိုတဲ့ အသံတွေ ဟိန်းထွက်ခဲ့ တယ်။
အလုပ်သမားတွေကို ကျွန်တော်က "ရဲဘော်တို့ æ ခုအချိန်က စပြီးတော့ သပိတ်မှောက်မယ်။ တို့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိဖို့အတွက် တို့ သပိတ်မှောက်ကြမယ်။ ဆန္ဒ ပြကြမယ်။ ဒီအခွင့်အရေး တွေ ရရှိဖို့ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်။" လို့ လှုံ့ဆော်လိုက်တယ်။
အလုပ်သမားတွေ တဖြောဖြော ရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်က စားပွဲတလုံးပေါ် တက် ရပ်လိုက်ပြီး "သပိတ်၊ သပိတ်" လို့တိုင်လိုက်တာနဲ့ "မှောက်æမှောက်" ဆိုတဲ့ အသံကြီးက တုန်ဟီး ထွက်ပေါ် လာတယ်။ နောက်တော့ တခြားစက်ရုံတွေဘက် ချီတက်ကြတယ်။ ဝယ်လ်ဒါရှော့ (Welder Shop) ဘက် ရောက်တော့ တခါ-
"ရဲဘော် အလုပ်သမား အပေါင်းတို့ တို့ ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်။ ဒီအတွက် တို့ အလုပ် မလုပ်ကြတော့ဘူး။ စက်ရုံတွေ ပိတ်မယ်" လို့ ကြေညာလိုက်တယ်။
ရဲဘော် ဘာရွှေက "အလုပ်သမား သပိတ်... မှောက်၊ မှောက" လို့ တိုင်ပေးတယ်။ နောက် ကျွန်တော်က ဖိတင်ရှော့က သော့၊ ဝယ်လ်ဒါရှော့က သော့၊ ၂ချောင်းကို သိမ်းထားလိုက်တယ်။
ရဲဘော်ဘာရွှေ ဦးဆောင်တဲ့ အလုပ်သမားတွေက ဒေါက်ကာ (Docker) ဘက်ကို ထွက်သွားကြတယ်။ ရဲဘော် ဘာရွှေဟာ ကရိန်းပေါ် တက်လိုက်ပြီး
"အလုပ်သမား ရဲဘော် အပေါင်းတို့ ခု အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုမယ်။ ရအောင်ကို တောင်းဆိုမယ်။ နွားမွေးရင် မြက်ကျွေးရမယ်။ လူမွေးရင် ဆန်ပေးရမယ်။" လို့ ဟောပြောတယ်။
အလုပ်သမားထုကြီးက "ဒို့အရေး ဒို့အရေး" လို့ ကြွေးကြော်ကြတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့တတွေ အယ်လက်ထရီကယ်ရှော့၊ မရှင်းရှော့၊ ရှစ်ဘီလ်ဒင် (Ship Building)၊ နောက် ဝယ်လ်ဒင်ရှော့၊ ကာပင်တာ (Carpenter) ဘော်ဒီ (Body) ရှော့၊ အင်ဂျင်ရီပဲယားရှော့ (Engine Repair Shop)၊ ဝန်ကြီးရုံး (TLC)၊ ဦးသာကျော်ရုံး( သင်္ဘောကျင်းထဲမှာပဲ သုံးတယ်) တွေဘက် လှည့်လည်ကြတယ်။
အဲဒီနေ့က ဦးသာကျော် မလာဘူး။ သူက အလယ်ထပ်မှာ နေတယ်။ ဝန်ကြီးရုံးမှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းတွေ ရှိတယ်။ သူတို့ကို ကျွန်တော်က ပြောတယ်။
"သင်္ဘောကျင်း တခုလုံးကို အလုပ်သမားတွေ သိမ်းလိုက်ပြီ၊ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ လက်တွဲပြီး သပိတ်မှောက်ပါ။ အတူတကွ ကျွန်တော်တို့ အခွင့်အရေးတွေကို တောင်းဆိုကြမယ်။ မရမချင်း တောင်းမှာ ဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ အလုပ်မဆင်းကြပါနဲ့"
သူတို့ဘက်က တုံ့ပြန်မှု ကောင်းပါတယ်။ အလုပ်မဆင်းကြပါဘူး။
ဒီကနေ ဆေးခန်းထဲ သွားတယ်။ ဒေါက်တာ စီစီနဲ့ နာ့စ် မလေး တင်တင်မူ ရှိတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်သမားတွေနဲ့ ခင်ကြတယ်။ စေတနာလဲ ကောင်းကြတယ်။ ဆေးပေး ရက်ရောတယ်။ တက်ထရာ ဆိုက်ကလင်း ဆို လက်တခုပ်ကြီး ပေးတာ။
သူတို့က အိမ်ပြန်ဖို့ ပြင်နေကြပြီ၊ ကျွန်တော်က အလုပ်သမားတွေကို ပစ်မသွားဖို့၊ အတူ လက်တွဲ တိုက်ဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ သူတို့လဲ အလုပ်သမားတွေကို စာနာပြီး မျက်ရည်တွေ ဝိုင်းလာကြတယ်။ နောက်တော့ အတူ လက်တွဲ တိုက်ဖို့ သန္နိဌာန် ချကြတယ်။
အလုပ်သမား ရဲဘော်တွေက ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာတယ်။ "ရဲဘော် ဝင်းထိန် တချို့ အရာရှိတွေ သပိတ်ကို ဖြိုခွဲဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ? ရိုက်ကြရမှာလား?" လို့ ပြောတာနဲ့
"ဟာ မလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့၊ ထိန်းသိမ်းထားပါ။ ဒီမှာ ရုံးဖွင့်ထားတာပဲ၊ ဒီကို ခေါ်ခဲ့ပါ" ဆိုတော့ မကြာခင် ကောင်စီဥက္ကဌ ဦးချစ်ဦး၊ ဒု ဥက္ကဌ ဦးအုန်းမောင်၊ နောက် အတွင်းရေးမှူး ကိုလှမြင့် ပါလာတယ်။ ပြီးတော့မှ မန်နေဂျာ ဦးမျိုးထွဋ်၊ ဦးဘကြိုင် စသူတို့ ပါလာတယ်။ သူတို့ မျက်နှာတွေလဲ မကောင်းကြဘူး။ ကျွန်တော်က
"ဦးမျိုးထွဋ်တို့ ဦးချစ်ဦးတို့ ခင်ဗျား စိတ်မရှိပါနဲ့၊ လုံခြုံရေးအတွက် ခေါ်ရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ယုံစေချင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို မသတ်ပါဘူး။ ခုလို အပြင်မှာ လုပ်နေတာကို အလုပ်သမားတွေက ခင်ဗျားတို့အပေါ် သံသယ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် လုံခြုံရေးအခန်းမှာ နေကြပါ" လို့ ပြောပြီး ထိန်းထားလိုက်ရပါတယ်။ လုံခြုံရေး သော့တွေအပါ သော့အားလုံးကို ကျွန်တော် ကိုင်ထားပါတယ်။
သပိတ်တိုက်ပွဲကို ၈ နာရီ ၉ နာရီမှာ စလိုက်ကြပြီမို့ အလုပ်သမား သပိတ် ကော်မတီလဲ ဖွဲ့ကြရတယ်။
ဥက္ကဌ ကျွန်တော်၊ ဒု ဥက္ကဌ ကိုဘန်ရွှေ၊ အကြံပေး ကိုတင်မြင့် စသည် တာဝန်ပေးကြတယ်။
ဥက္ကဌ အနေနဲ့ ဂိတ်က အုတ်တိုင် တတိုင်ပေါ်တက် မိုက်ကရိုဖုန်း ကိုင်ပြီး မ်ိန့်ခွန်းပြောရတယ်။
"ရဲဘော် အလုပ်သမား အပေါင်းတို့-
ခုအချိန်က စပြီး ဒို့တတွေ ဆင်မလိုက် သင်္ဘောကျင်းကို သိမ်းလိုက်ပြီ၊ စက်ရုံတွေ အားလုံးကို တို့ သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီ၊ စက်ရုံတွေနဲ့အတူ စစ်သင်္ဘောတွေကိုလဲ သိမ်းထားလိုက်ပြီ၊ ဒါကြောင့် စက်ရုံတွေ အားလုံးဟာ သင်္ဘောတွေ အားလုံးဟာ တို့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အာဏာအောက်မှာ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် တို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ စက်ရုံတွေအတွက် တို့ အလုပ်သမားတွေ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးအတွက် တို့ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြမယ်။ တောင်းဆိုချက်တွေ မရမချင်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်သွားမယ်။ တို့ဟာ အညံ့မခံဘူး။ အလျှော့မပေးဘူး။
ရဲဘော် အလုပ်သမား အပေါင်းတို့-
စုစုစည်းစည်းနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါ။" လို့လဲ တောင်းဆိုလိုက်ရော အလုပ်သမားတွေက "ဒို့ အရေး ဒို့ အရေး" လို့ ကြွေးကြော်လိုက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်က ဆက်ပြီး ကောင်စီမှာ ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးတဲ့ M ၆လုံး ကိစ္စ ရှင်းပြပါတယ်။ နောက်မှ....
"ဒီ M ၆လုံး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိဘဲနဲ့ ဒီလောက် ခေတ်မီတဲ့ သင်္ဘောကျင်းကြီး မလည်ပတ်နိုင်ဘူး။ ကရိန်းနဲ့ မ, ရမယ့်ဟာကို လူတွေနဲ့ မနေကြရတယ်။ ရဗစ် ရိုက်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ကြည့်လိုက်ဦး စစ်ဘိနပ်က ကျွဲတဖက်၊ နွားတဖက် ကိုယ်ပေါ်မှာ စက်ဆီတွေပေ၊ တပေါင်း-တန်ခူး၊ ဧပြီ လကြီးထဲမှာ ခွေးတွေလို ၄-ဘက်ထောက် ရဗစ်ရိုက်နေကြရတယ်။ သံဂဟေဆော်တဲ့ အလုပ်သမားတွေ ခဏခဏ ဓာတ်လိုက်ခံရတာတို့ ဘာတို့ ဖြစ်ကုန်တယ်။
ဆိုချင်တာက လုပ်ငန်းခွင်ဟာ အန္တရာယ် မကင်းဘူး။ အန္တရာယ်ကင်းအောင် ရဲဘော်တို့ တောင်းဆိုကြရ လိမ့်မယ်။ နောက်တခု-
ရဲဘော်တို့ အလုပ်ဆင်းတဲ့ အခါ ၇ နာရီခွဲ အရောက်လာနိုင်ဖို့ ၆ နာရီ ကတည်းက အိမ်က ထွက်ရတယ်။ မိုးချုပ်မှ အိမ် ပြန်ရောက်တယ်။ အချိန်တွေ အများကြီး ကုန်သွားပြီ။ တနေကုန် အလုပ်ထဲမှာပဲ နစ်နေကြရတယ်။ ရတဲ့ လစာက သိပ်နည်းတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမှာ အိမ်ခန်းရဖို့ လိုလာပြီ။ အိမ်ခန်း ရဖို့ တောင်းဆိုရမယ်။
အိုဗာတိုင်ကိစ္စလဲ ပြောရမယ်။ အိုဗာတိုင်ကို တလ ၇၂ နာရီ ပဲ လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ တို့ လက်တွေ့ လုပ်ပးကြရတာက နာရီ ၁ဝဝ ကျော်တယ်။ နာရီကျော်တွေဟာ ဒေးအော့ (day off) နဲ့ပဲ ပြန်ရတယ်။ ဆိုချင်တာက အိုဗာတိုင် လုပ်ခ အပြည့်မရဘူး။ ရတဲ့ လစာက သိပ်နည်း။ တချို့ ဘားဆုံးနေပြီ။ ပရိုမိုးရှင်း တင်ပေးသင့်ပြီ။
ချုပ်လိုက်ရင် လုပ်ခတွေ သိပ်နည်းတယ်။ အိုဗာတိုင် တအားလုပ်နေရတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ကလဲ အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေအတွက် တို့ တိုက်ကြမယ်။ ဆန်လုံလောက်စွာ ရဖို့ တောင်းဆိုရမယ်။ လစာ တိုးပေးဖို့၊ ရာထူးတိုးပေးဖို့၊ နေအိမ် ရရှိဖို့၊ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းဖို့တွေလဲ တောင်းဆိုကြရမယ်။" နောက်တော့ ကျွန်တော်က ကြွေးကြော်သံတိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆန်လုံလောက်စွာ ရရှိရေး..... (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး။)
ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး.... ( ။ )
နေအိမ်ရရှိရေး..... (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
လုပ်ငန်းခွင် အန္တရယ်ကင်းရေး..... ( ။ )
လစာ တိုးမြှင့်ရေး..... ( ။ )
နောက်တဆက်တည်း သင်္ဘောကျင်းထဲမှာရှိတဲ့ ရေတပ်ကိုလဲ ထပ်ပြီးတော့ ပန်ကြားရတယ်။ ဒီအချိန်က ဒေါက်တင်ထားတဲ့ ရေတပ်သင်္ဘော ၅ စင်း ရှိတယ်။
"ရန်လုံးအောင်၊ ရန်မျိုးအောင်၊ သုတေသီ၊ နဂါးကျင်း၊ နဝရတ် သင်္ဘောပေါ်က တပ်မှူး တပ်သား အပေါင်းတို့ ရဲဘော်တို့ကို ကျွန်တော်တို့ အိမ် ပြန်ခွင့် မပေးတော့ဘူး၊" လို့လဲ ကြေညာလိုက်တယ်။
(ကျွန်တော်က ကြားဖြတ်ပြီး ရဲဘော်တွေကို မေးလိုက်တယ်။)
မေး။ ။ ဒေါက်တင်နေတဲ့ အချိန် သင်္ဘောပေါ်မှာ စတင်းဘိုင် (stand by) လား?
ဖြေ။ ။ သူတို့ဘာသာ လုပ်နေကြတာပဲ၊ ရိုးရိုးနေကြတာပေါ့။ အိမ်မှာ နေသလို နေကြတာပဲ။
မေး။ ၊ သူတို့က သင်္ဘောကြီး ထားခဲ့ပြီး ကမ်းပေါ်တက်တာ ရှိသလား?
ဖြေ။ ။ မရှိဘူးလေ။
ဒီနေရာမှာ ပြောဖို့လိုတာက သင်္ဘော တစီးမှာ တပ်ခွဲ တခွဲ ရှိတယ်။ ၅စီး ဆို ၅ ခွဲ ရှိတယ်။ တစီး တစီးကို ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး (C.O) သို့မဟုတ် ဗိုလ်မှူးတယောက် အုပ်ချုပ်တယ်။
သုတေသီ သင်္ဘောက အဏ္ဏဝါ ဆိုက်စမစ် (Seismic) ဒီကောင်က တန်ဖိုး သိပ်ကြီးတယ်။ အဲဒီခေတ် ငွေဈေးနဲ့ကို သိန်း ၅ဝ-၆ဝ လောက် ပေးရတယ်။ ရန်မျိုးအောင်က စတီး သင်္ဘော၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက မဟာရေယာဉ် (ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး အုပ်ချုပ်တယ်) ရန်မျိုးအောင်မှာ အမြောက် ပါတယ်။ သုတေသီ၊ မေယု တို့မှာလဲ အမြောက်ပါတယ်။ တခြား လက်နက်မျိုးစုံ တပ်ဆင်ထားရာမှာ ဘောက်ဖာ၊ ပွိုင့် ၅ စသည့် ရှိကြတယ်။ နေဝင်းစတင်းကို ရိုးရိုး တပ်သားတွေ ကိုင်ကြရတယ်။ သင်္ဘောတိုင်းမှာ ရိက္ခာတွေ ရှိကြတယ်။ ပဲအိတ်၊ ဆန်အိတ် အပြင် အခြေခံ ရိက္ခာ စုံစုံလင်လင် တင်ထားရတယ်။ သူတို့ အတွက် ပြဿနာ မရှိ၊ ဒါနဲ့.....
"သင်္ဘောပေါ်မှာ ရှိတဲ့ တပ်မှူး တပ်သားအပေါင်းတို့၊ ရဲဘော်တို့ အိမ် မပြန်ကြပါနဲ့။ ဒီအထဲမှာပဲ နေကြပါ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ တိုက်ပွဲ အတူ ဝင်ကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲကို ရဲဘော်တို့ ထောက်ခံ ကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်"
အဲဒီတော့ ရေတပ်က ရဲဘော်တွေ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ လာပြီး ဆန္ဒပြတယ်။
သင်္ဘောပေါ်ရှိတဲ့ သူတွေဟာ မြို့ထဲ သွားချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ ဂိတ်တွေ ဖြတ်မှရတယ်။ ရေလမ်းပေါက် က ထွက်မယ်ဆိုရင်လဲ သင်္ဘောတွေကို ကျွန်တော်တို့က ကိုင်ထားလိုက်ပြီ။ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။ ရေတပ် အနေနဲ့ ပစ်မယ် ခတ်မယ် ဆိုရင် အချိန်မရွေး ပစ်နိုင်ပါတယ်။
မကြာလိုက်ပါဘူး၊ ရန်လုံးအောင် သင်္ဘောက ဗိုလ်မှူး စိုးလှိုင် ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာတယ်။ ဝန်ကြီး ရုံးမှာဆွေးနွေးတယ်။ သူက "ဆရာ ဝင်းထိန် ဘယ်လိုလဲ?"...... တဲ့။
ကျွန်တော်က "ဗိုလ်မှူး စိုးလှိုင် ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါ။ ရိက္ခာတွေ လိုချင်တယ်။ ရမလား?" ဆိုတော့ "ယူပါ၊ ရပါတယ်" တဲ့။
ဆက်ပြီး သူက "ခင်ဗျားတို့ သပိတ် နိုင်ပါ့မလား?" ပေါ့
ကျွန်တော်က "နိုင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကို ဗိုလ်မှူး ထောက်ခံစမ်းပါ။ ဗိုလ်မှူးတို့ လုံခြုံရေးကို အာမခံပါတယ်။" လို့ ပြောလိုက်တော့ နှုတ်ဆက်ပြီး ဗိုလ်မှူး စိုးလှိုင် ပြန်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ပင်ပန်းလွန်းတာနဲ့ နားနေစဉ် အလုပ်သမား ရဲဘော် တယောက် လာသတင်းပို့တယ်။
"ဗိုလ်မှူးရဲညွန့် လာနှောက်ယှက်နေတယ်။ အလုပ်သမားတွေ သပိတ်မမှောက်ရဘူး...လို့ ပြောနေတယ်။"
ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်ကို သွားအခေါ်ခိုင်းပေမယ့် လိုက်မလာပါ။ သူက ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သူ့ရုံးခန်းကို ကျွန်တော် လိုက်သွားပြီး "ဗိုလ်မှူး ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့နဲ့ လိုက်ခဲ့စေချင်တယ်။" လို့ ပြောတော့ ပထမမှာ ငြင်းနေသေးတယ်။ ကျွန်တော်က "ခင်ဗျားရဲ့ လုံခြုံရေး အန္တရာယ် ရှိတယ်နော၊ လိုက်ခဲ့ပါ" ဆိုတော့မှ လိုက်လာပါတယ်။ "မောင်ရင် ကြည့်လဲ လုပ်ပေးပါ" လို့ လဲ ပြောတယ်။
"ဒါတွေ ထားလိုက်စမ်းပါ" ဆိုပြီး ခေါ်ထုတ်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် တွဲထွက်လာတာ မြင်တော့ အလုပ်သမားတွေက လက်ခုပ်တီး ကြိုကြပါတယ်။
"ဒို့အရေး... ဒို့အရေး၊ သပိတ်.... သပိတ်၊ မှောက်...... မှောက်။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး.... ဒို့အရေး" ကြွေးကြော်သံတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
သပိတ်မှောက် အလုပ်သမားတွေအတွက် ရိက္ခာ ကိစ္စက စဉ်းစားရပြီ၊ ဒါကြောင့် ကားတစီးကို အလံထိုးပြီး ရဲဘော်တချို့ အင်းစိန်ဘက် ထွက် အလှူခံကြတယ်။ ပြန်လာကြတော့ ရိက္ခာတွေက ကားနဲ့ အပြည့်ပဲ၊ ထမင်းထုပ်တွေ၊ လက်ဖက်သုတ်ထုပ်တွေလဲ ပါလာတယ်။ ထမင်းထုပ်တွေထဲမှာ လက်ရေးလှလှနဲ့ "အလုပ်သမား သပိတ်ကို ထောက်ခံတယ်" ဆိုတဲ့ စာတွေတွေ့ပြီး အားတက်ကြတယ်။ တချို့ အထုပ်တွေထဲမှာ ပိုက်ဆံတွေ ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကတော့ မျိုးစုံပဲ။ ရပ်ကွက်ထဲက အရပ်သူအရပ်သားတွေကလဲ ထမင်းအိုးကြီးတွေနဲ့ ရောက်လာကြတယ်။ ဟင်းတွေကလဲ မျိုးစုံ။
ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံမှာပဲ လက်ကမ်း စာစောင်တွေ ရိုက်တယ်။ တောင်းဆိုချက်တွေ ကြွေးကြော်သံတွေ ပါတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး၊ ဆန်လုံလောက်စွာ ရရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေး၊ လစာ တိုးမြှင့်ရေး စသည် အပြင် ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး အောင်ရမည် ဆိုတာလဲ ထည့်ရိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမားတွေက ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တာမှ မဟုတ်ပဲ။ မဆလ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေတာက တပိုင်းပဲ။ ဂက်စတင်နာ (Gestener) နဲ့ရိုက်ပီး ဝေငှကြတယ်။
နောက်.... မိန်းခလုတ်ရှိရာ တယ်လီဖုန်းရုံးမှာ ကျွန်တော် သွားထိုင်တယ်။ စက်ရုံအသီးသီးကို ဆက်သွယ်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံဘေးမှာတင်ရှိတဲ့ သုံးထပ်သား စက်ရုံမှာလဲ စ တိုက်ပွဲဝင်နေပြီ။ သူတို့က ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်လာတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲပေါ့။ ကျွန်တော်က "သပိတ်ကတော့ ဆက်မှောက် ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အညံ့မခံဘူး။ တောင်းဆိုချက်တွေ ရတဲ့ အထိ တိုက်သွားမယ်" ပြောတာကို လက်ခံသွားတယ်။ နောက် အမှတ် ၁-၂ သစ်စက်တွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရောက်လာတယ်။ ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဘဝတူ အလုပ်သမား အချင်းချင်း သွေးစည်းကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကလဲ ဆက်သား၊ ကိုယ်စားလှယ် စသည် လွှတ် ဆွေးနွေးတာတွေ ရှိတယ်။ BPI ဘက် လွှတ်ဖို့ ပြင်နေစဉ် စက်ရုံပေါင်းစုံက အလုပ်သမားတွေ ရောက်လာပြန်တယ်။ သူတို့ခံစားချက်တွေ ရင်ဖွင့်ကြတယ်။ သမိုင်းချည်မျှင်၊ ဂုံနီစက်ရုံ၊ BPI က အလုပ်သမားတွေ ရောက်လာပြီး ဟောပြောကြ၊ ရင်ဖွင့်ကြတိုင်း "ဒို့အရေး.... ဒို့အရေး" ထောက်ခံသံတွေနဲ့ လက်ခုပ်သံ တဖြောင်းဖြောင်း တီးကြတယ်။
ညနေပိုင်းလောက် ဗိုလ်မှူးစိုးလှိုင်နဲ့ ထပ်တွေ့တော့ "ဗိုလ်မှူး ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပါဦး" ဆိုတော့ "ဘာများလဲ? ကူညီတာပေါ့" လို့ပြောတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်တို့ ဌာနမှာ ရေတပ်က လာတည်ပေးထားတဲ့ လျှပ်စစ်ဌာန ရှိတယ်။ တချို့ လျှပ်စစ်ပညာတွေက မြင့်တော့ ရေတပ်က သင်ထားတဲ့ လူတွေမှ လုပ်လို့ရတာ ရှိတယ်။ ရေတပ်က PO တွေအားလုံးကိုလဲ အရေးကြီးတဲ့ ဌာနတွေကို အလုပ်သမားတွေနဲ့ တွဲပြီး စောင့်ရှောက် ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံထားတယ်။
ညနေဘက်မှာ အလုပ်သမားရဲဘော်တချို့ကို အင်းစိန်ဘက် ထပ်လွှတ်တယ်။ ၆ နာရီလောက် ရှိမယ် ထင်တယ်။ သူတို့ပြန်လာပြီး သမိုင်း ဘာတာရှေ့၊ သမိုင်းဈေးမှာ အလုပ်သမား အရပ်သားတွေ ပစ်သတ်ခံရတဲ့ အကြောင်း ပြောပြကြတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က "ရဲဘော် အလုပ်သမားအပေါင်းတို့ တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခက်လာပြီ၊ ဒါပေမဲ့ တို့ဟာ ဒူးမထောက်ဘူး။ အညံ့မခံဘူး။ ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်သွားမယ်။ အခု သမိုင်း ဘာတာရှေ့မှာ တို့အလုပ်သမား ရဲဘော်တွေ အသတ်ခံရတယ်။ ပစ်သတ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး တို့ဟာ ဒူးမထောက်ဘဲနဲ့ အသေခံ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ တို့တောင်းဆိုချက်တွေ မရမချင်း တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ တို့ စုစုစည်းစည်းနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မယ်။ ရဲဘော်တို့ကို ကျွန်တော် ကတိပေးတယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ဘူး။ ရဲဘော်တို့နဲ့အတူ ကျွန်တော်ရှိမယ်" လို့ မိန့်ခွန်းတို ပေးခဲ့တယ်။
နောက်တော့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဂုံနီစက်ရုံကို လှမ်းဆက်တယ်။ ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးက ဖုန်းလက်ခံတယ်။ ကျွန်တော်က သမိုင်းချည်မျှင်စက်ရုံရှေ့မှာ အလုပ်သမားတွေ ပစ်သတ်ခံရတဲ့ အကြောင်း သတင်းပေးပြီး "ကျွန်တော်တို့ကတော့ မလျှော့ဘူး၊ ဒူးမထောက်ဘူး။ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်၊ မရမချင်း တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ လိုအပ်တာရှိရင် အကြောင်းကြားမယ်၊ ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလဲ အကြောင်းကြားပါ" လို့ ပြောတယ်။ သူတို့စက်ရုံကလဲ ဒီသဘောအတိုင်းရှိကြောင်း ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒီအချိန် ဂုံနီစက်ရုံမှာ ဗဟိုကော်မတီ အသစ်ရွေးချယ်ပွဲ စနေပြီ။
အဲဒီ ညနေမှာ မိုးတွေ ရွာချလာတယ်။ အခြေအနေကအရေးကြီးလာချိန်မို့ ဝန်ကြီးရုံးမှာ အိပ်စောင့်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ကျွန်တော်ကပြောတယ်။ "ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ၊ ဒီတိုင်းနေလို့ မဖြစ်ဘူး၊ လုပ်စရာတွေ ရှိတာတွေ လုပ်ကြရမယ်။ အခြေအနေ သိပ်မကောင်းဘူး" ဆိုတော့ ကျွန်တော့်နောက် လိုက်လာကြတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေတပ်က အရာရှိတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမားတွေ တွဲကိုင်ထားကြတယ်။ လုံခြုံရေးလဲ အလားတူပဲ။ တယ်လီဖုန်းရုံးကို ကျွန်တော်တို့ သွားကြတယ်။ ကက်ဆက်နဲ့ ကျွန်တော့်အသံကို သွင်းလိုက်ပြီး စပီကာနဲ့ "ပြည်သူကိုပန်ကြားချက်" ထုတ်လွှင့်လိုက်တယ်။ စက်ကြီးကသိပ် ကောင်းတော့ စက်ရုံတွေအားလုံးဆီ တပြိုင်တည်း ရောက်ရှိ သွားပါတော့တယ်။
"မိဘ ပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျား အစိုးရဟာ သမိုင်းဘာတာရှေ့မှာ ရိုးသားစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီတော့ မိဘ ပြည်သူအပေါင်းတို့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လက်တွဲပါ။ စစ်အစိုးရက အခု အပြစ်မဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမားတွေကို ပစ်သတ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါ" လို့ ပန်ကြားပါတယ်။ ဒီ အသံကို အသံချဲ့စက်ကနေ အမြဲဖွင့်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ အစိုးရအလိုတော်ရိ တယောက်က သပိတ်ကော်မတီ ပြင်ဖွဲ့ရမယ်။ သူလဲ ပါမယ်ဆိုပြီး ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် လုပ်လာတယ်၊ အတွင်းပိုင်းကနေ သပိတ် ဖြိုခွဲဖို့ လုပ်လာတာမို့ ဖမ်းထိန်းသိမ်းလိုက်ရ တာရှိတယ်။
မိုးက ချုပ်သည်ထက် ချုပ်လာပြီ။ ဒီအချိန် ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်က ကျွန်တော့်ကို လှမ်းခေါ်ပြန်ရော၊ "ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ" ဆိုတော့ "မောင်ရင်တို့ကို စစ်တပ်က ပစ်တော့မယ်၊ ကိုယ်လဲ အရာရှိပဲမောင်ရင်၊ စေ့စပ်လိုက်စမ်းပါ။" လို့ ပြောတယ်။ "တော်စမ်းပါ၊ လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့၊ ထားလိုက်စမ်းပါ၊" လို့ ကျွန်တော်က ဟန့်လိုက်တော့ ဦးချစ်ဦးတို့ ဦးမျိုးထွဋ်တို့က ကျွန်တော့်ကို ကြည့်တယ်။ သူတို့ကိုတော့ စာနာပါတယ်ဆိုတဲ့ အမူအယာလောက်ပဲ ပြလိုက်မိတယ်၊ သူတို့ကိုလဲ အချုပ်ထဲ ထည့်ထားရတယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်လိုက်လာတယ်။ ထမင်းလဲ မစားရ၊ ရေလဲ မသောက်မိတာ ဘယ်လောက်ကြာ သွားပြီလဲ မသိ။ ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး တယောက်ပေးတဲ့ Lunch Box နဲ့ကိစ္စပြီးလိုက်ပြီး တယ်လီဖုန်း ရုံးခန်းထဲ ရောက်နေချိန် ဦးမြဟန်ကြီး ရောက်လာတယ်။ မူလက PO ပင်စင်ယူပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်တို့ဆီ ဖစ်တာ အဖြစ်နဲ့ ဝင်လုပ်နေသူပဲ။
သူက "ကိုဝင်းထိန် ကမ်းနားမှာကွန်မင်ဒို သင်္ဘော ကပ်နေပြီ။ သူတို့ပစ်လိမ့်မယ်။" လို့ ပြောတော့ "ဦးမြဟန် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ဘာမှ မဆွေးနွေးချင်ဘူး၊ ထားလိုက်ပါ" လို့ တားလိုက်တယ်။
သူထွက်သွားပြီး မကြာခင် ကိုကျော်ကြီးခင်နဲ့ ရောက်လာပြန်တယ်။ "ရေလယ်မှာ ဗိုလ်မှူးသိန်းထွန်း စောင့်နေတယ်၊ ခင်ဗျားနဲ့ စကားပြောချင်လို့တဲ့၊" ဒီတော့ ကျွန်တော် တွက်လိုက်မိပြီ "ငါ့တော့ ဆွဲတော့မယ်" သူတို့ခေါ်တဲ့နေရာ လိုက်သွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ဖမ်းပြီလေ၊ ဒီလိုဆိုရင် အလုပ်သမားတွေကို ညွှန်ကြားလို့ မရတော့ဘူး၊ လှုပ်ရှားမှု ပြိုကွဲသွားတော့မယ်၊ မဖြစ်ဘူး။
"ကျွန်တော် မလာနိုင်ဘူး၊ တွေ့ချင်ရင် ဗိုလ်မှူးသိန်းထွန်း ကျွန်တော့်ဆီ လာပါစေ" လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဦးမြဟန် ပြန်ထွက်သွားတယ်။
ခဏနေတော့ တခေါက်ပြန်လာကြတယ်။ ကျော်ကြီးခင်က "ကိုဝင်းထိန် သူတို့ တကယ်ပစ်တော့မယ်" တဲ့။ "ပစ်ရင်လဲ ပစ်ပစေကွာ" လို့ တုံ့ပြန်လိုက်တယ်။
စဉ်းစားရတာတွေကတော့ အများကြီး- ရေတံခါးကြီး ပျက်စီးသွားရင်၊ ပေါက်ကွဲသွားလို့ရှိရင်၊ အားလုံးအထိနာမယ်။ စက်ရုံတွေ ပျက်စီးမယ်။ စက်ရုံထဲ ဝင်ပစ်ရင်လဲ သေကြ ကြေကြ အထိနာကြမယ်။ စက်ရုံရဲ့ လုံခြုံရေး အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုံခြုံရေး စဉ်းစားလာရတယ်။ နောက်ထပ် ဆုံးရှုံးမှုကြီးတခု ရှိသေးတယ်။ ခုလို တောင်းဆိုလာကြပြီးမှ တောင်းဆိုချက် ဘာမှ မရဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့သပိတ်ကြီး ပျက်စီးသွားမှာ- ပြီးဆုံးသွားမှာပဲ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ မိုက်ကရိုဖုန်း ကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး...
"ရဲဘော် အလုပ်သမားအပေါင်းတို့ စက်ရုံရဲ့ လုံခြုံရေးကို တို့အားလုံး တာဝန်ယူရမယ်။ နောက် ရေတံခါး၊ သင်္ဘောတွေရဲ့ လုံခြုံမှုနဲ့ စက်ရုံတွေ အားလုံးရဲ့ လုံခြုံမှု၊ တို့အားလုံးရဲ့လုံခြုံမှုကို တို့တာဝန်ယူရမယ်။ ဒီစက်ရုံဟာတို့ရဲ့ စက်ရုံဖြစ်တယ်။ တို့ဟာ တို့တောင်းဆိုချက်တွေ မရမချင်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်သွားမယ်။ တို့ အညံ့မခံဘူး၊ ဒူးမထောက်ဘူး၊ ရတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။
အခု သပိတ်မှောက်မှုဟာ ဗမာတပြည်လုံး ဖြစ်နေပြီ။ တို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ဆိုလို့ ရှိရင်လဲ အခု သပိတ်မှောက်နေပြီ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းဆိုတာက ဒုဗိုလ်မှူးကြီး လှမြင့်- ဘဲကြီးလှမြင့် (ဘဲလ်အဲယား လှမြင့်) ဆိုတာဟာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေ ပါးရိုက်တဲ့ ဘဲ။ ဒီကောင် သူရဲ-သူရဲ၊ အဲဒီမှာ သူက နာယက ဖြစ်နေတာ- ခု သူ့ဆိပ်ကမ်းမှာ အလုပ်သမားတွေ သပိတ်မှောက်နေပြီ။
ပြီးတော့ တို့ရဲ့ သပိတ်ဟာ တပြည်လုံးလက္ခဏာ ဆောင်တယ်။ တို့ တောင်းဆိုချက်တွေ ရ, ရမယ်။ တို့ တတွေ ရတဲ့အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ ရအောင် တိုက်မယ်။ တို့ အညံ့မခံဘူး။ လျှော့လို့ မရဘူး" လို့ ပြောချလိုက်တယ်။
ဒါကိုကြားပြီး ချက်ချင်းပဲ သုံးထပ်သားစက်ရုံကလဲ ကျွန်တော်တို့နဲ့ တသဘောထဲ ရှိကြောင်း။ "လုံးဝ အညံ့မခံဘူး၊ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်၊ တောင်းဆိုချက်တွေ ရအောင်တိုက်မယ်" ဆိုတဲ့အကြောင်း အကြောင်းကြားလာတယ်။
စစ်တပ်က နေဝင်ရင် ပစ်မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေတာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် သစ်စက်ကလာ ပြောတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ သစ်တုံးတွေနဲ့ ကာထားတယ်။ စက်ရုံထဲ ဝင်ပစ်လို့မရအောင် ဖြစ်တယ်" တဲ့။ ကွန်မင်ဒိုတွေ ဝင်ပစ်မှာကို တားဆီးတဲ့သဘောပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ အက်ဆစ် စက်ရုံရှိတယ်။ ကော့စတစ် စက်ရုံ- အဲဒီကလဲ အတူတူပဲ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူတိုက်ပွဲ ဝင်မယ်တဲ့။
ဂုံနီစက်ရုံ၊ သမိုင်း ချည်မျှင်စက်ရုံ တို့ကိုလဲ "စစ်တပ်က ဝင် ပစ်မယ့် အခြေအနေရှိတယ်၊ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တို့ရအောင် တိုက်ပွဲ ဝင်သွားမယ်။ မစေ့စပ်တော့ဘူး၊ သပိတ်ကတော့ တပြည်လုံး ဖြစ်နေပြီ။ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း သပိတ်ကြောင့် ကမ်းနားမှာ ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်တော့မယ်။ ရပ်တာနဲ့ အစိုးရ အခက်အခဲရှိပြီး တပြည်လုံး အလုပ်သမားနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တောင်းဆိုချက်တွေ ရအောင် တိုက်ပွဲ ဝင်သွားမယ်" လို့ ဖုန်းနဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။
နောက်တော့ အခန်းသော့ဖွင့်ပြီး ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်ကို ခေါ်ထုတ်လာခဲ့တယ်။ ချက်ချင်းလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိန်းဂိတ်ရှေ့မှာ စစ်ကားတွေရောက် လာတယ်။ ကွမ်းခြံဘက်က လာတာဖြစ်တယ်။ ရေတပ်က မဟုတ်ဘူး၊ လှည်းတန်းဘက်က- ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ သပိတ်ကော်မတီဝင်တွေက အလုပ်သမားထု ကြားထဲမှာ ရှိနေတယ်။
တချို့ရဲဘော်တွေက ကျွန်တော့်ကို ဒီနေရာက စွန့်ခွာဖို့ ပြောနေပြီ။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ စက်ရုံသော့ အားလုံးရှိတယ်။ မာဇဒါ ဂျစ်ကားကို လိုရ မယ်ရ အပြင်တနေရာမှာ ထားတာ ရှိတယ်။ ထွက်သွားရမလား... လို့ အတွေးတချက် ပေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အလုပ်သမားရဲဘော်တွေကို သစ္စာမဖောက်နိုင်ဘူး။ ပေါက်ကွဲလု မတတ်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကြီးကို စွန့်မသွားနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ သေစရာရှိလို့ရှိရင် ရှေ့ကသေမယ်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကနေ မသေရဘူး။ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ရဘူး။ ငါသေပြီး နောက်မှ နောက်လူတွေ သေရမယ်။ ဒီလို စဉ်းစားပြီး 'လူထု' ကြားထဲက တပ်ဦးကို ကျွန်တော် တိုးထွက်လာ တယ်။ ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်ကိုတော့ ကိုင်ထားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မိန်းဂိတ် သံတံခါးကို ရောက်သွားပြီ၊ တဖက်က မြင်နိုင်တဲ့နေရာ ပစ်မယ်ဆို လှမ်းပစ်လို့ ရတဲ့နေရာ၊ ပထမ ဆုံးထိမှာက ကျွန်တော်နဲ့ ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်ပဲ။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ ရဲဘော်ဘီကျော်စိန်က တွန်းထိုး ထွက်လာတယ်။ နောက် အုတ်ခုံပေါ် တက်လိုက်တယ်။ သင်္ဘောကျင်း တခုလုံး မီးတွေလင်းနေတယ်။ ဆလိုက်မီးတွေကလဲ ထွန်းထားသေးတယ်။ BAA ဂရောင်းက ဆလိုက်ကြီးတွေ လေ အားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နေရတယ်။
ရဲဘော် ဘီကျော်စိန်က စစ်တပ်ကို "မင်းတို့ပြန်သွားပါ၊ အလုပ်သမားတွေကို အန္တရာယ်မပေးနဲ့၊ တို့ အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုနေတာက ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး၊ ဆန်လုံလောက်စွာ ရရှိရေးပဲ၊ အလုပ်သမား တွေနဲ့ အစိုးရဟာ ရန်သူမဟုတ်ဘူး၊ နောက်ကို ပြန်ဆုတ်ကြပါ။ အလုပ်သမားတွေဘက်ကို လှည့်ထားတဲ့ သေနတ်ပြောင်းတွေ- တဖက်ကို လှည့်လိုက်ပါ။" လို့ ပြောတယ်။ စစ်တပ်ဘက်က လှုပ်ရှားမှု မပြတာနဲ့ ပြန်ဆင်းသွားတယ်။
ဒီတော့မှ ဆိုင်ထားတဲ့ဘက်က ဗိုလ်မှူးတယောက် စပီကာနဲ့ စကားပြောတယ်။ "အလုပ်သမားတွေ၊ ခင်ဗျားတို့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ကောင်စီအဆင့်ဆင့်ကနေ တောင်းပါ၊ ခု ဆန္ဒပြမှုကို ရပ်လိုက်ကြပါ။ ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်ကို ကျွန်တော်တို့လက်ထဲ ပြန်အပ်ပါ။ သပိတ်ကို လူစု မခွဲဘူး၊ ဗိုလ်မှူး ရဲညွန့်ကို ပြန်မအပ်ဘူးတိုရင် ရတဲ့နည်းနဲ့ ယူရပါလိမ့်မယ်။" တဲ့။ ပြောပြီးတာနဲ့ စစ်တပ်က ကျွန်တော်တို့ကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားလိုက်ကြတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်က ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်လက်ကို လိမ်လိုက်ပြီး "ခင်ဗျားတို့ တွေ့ချင်တဲ့ ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်ဆိုတာ ဟောဒီမှာပဲ။ အဲဒီတော့ သူ့ကိုလိုချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုချက်တွေကို လိုက်လျောပါ။ ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုနေတာမှာ - အလုပ်သမားတွေနဲ့ လုပ်သားပြည်သူတရပ်လုံး အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး၊ ဆန်လုံလောက်စွာရရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ကိစ္စ၊ နေအိမ်ရရှိရေး တို့ဖြစ်တယ်။ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးကို တောင်းနေတာသာ ဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ဆီက အာဏာကို လုနေတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ကို တိုက်မယ့် သေနတ်ပြောင်းတွေကို တနေရာကို လှည့်လိုက်ပါ။
စစ်တပ်ဘက်က အရာရှိကြီး အပေါင်းတို့- ကျွန်တော်တို့ကို မတိုက်ပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ တိုက်ရမှာက တနေရာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လုပ်သားပြည်သူတရပ်လုံးအတွက် တောင်းဆိုနေတာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို တည်ဆောက်နေတာ ဖြစ်တယ်။ အလုပ်သမား လူတန်းစားဟာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာ မဖောက်ဘူး။ ဆိုရှယ်လစ် စနစ်အတွက် အလုပ်သမားလူတန်းစားက အခု တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်။"
(ဒီအချိန် နောက်ကနေ ထပ် ရိုက်လာတဲ့ ပန်းဖလက်တွေ လာပို့လို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ 'ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်ပြောင်း တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲခံရမယ်။' 'ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦး သက်တော် ရာကျော် ရှည်ပါစေ' ဆိုတာတွေ ပါတယ်။ ထိပ် မြွေကိုက်ခံနေရ ချိန်မှာမှ ရောက်လာတာဖြစ်လို့ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပြီး)
"အဲဒီတော့ စစ်တပ်က တပ်မှူး တပ်သား အပေါင်းတို့ ခင်ဗျားတို့ တပ်ကို ပြန်သွားကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆိုရှယ်လစ် စနစ်ကို တည်ဆောက်နေတဲ့အတွက် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့ ရန်သူမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြန်ဆုတ်ကြပါ။"
၆ ရက်ည တညလုံး အပြန်အလှန်ပြောလာလိုက်ကြတာ ၇ ရက် နံနက် ၄ နာရီထိုးတော့ မီးကျည်တလုံး ကောင်းကင်ကို ဖွေးကနဲ ထိုးတက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ရည်ရွယ်ချက်တခု ရှိတယ်။ တညလုံး အချိန်ဆွဲ ထားပြီး မိုးလင်းတာနဲ့ ရန်ကုန်တမြို့လုံးမှာ ရှိတဲ့ စက်ရုံတွေ ထပ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က
"ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်ကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ကျွန်တော်ပြန်အပ်မယ်။ ခင်ဗျားတို့က သေနတ်ပြောင်းတွေ တနေရာ လှည့်လိုက်ပါ" လို့ လှမ်းပြောလိုက်တယ်။
ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်က "ဖိုးဝင်းထိန် စစ်တပ်ကတော့ တကယ် ပစ်တော့မယ်။ ကိုယ့်ကို မောင်ရင်တို့အလျှော့ ပေးလိုက်ပါ။" လို့ ခပ်အုပ်အုပ်ပြောတယ်။
"ဗိုလ်မှူးရဲညွန့် ခင်ဗျားလဲ ကျည်ဆံတတောင့် ကျွန်တော်လဲ ကျည်ဆံတတောင့်ပဲ၊ သေရင်တော့ အတူသေကြမှာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ခင်ဗျားအနေနဲ့ လုပ်သားပြည်သူတွေအပေါ်မှာ တကယ်သံယောဇဉ် ရှိရင်၊ တကယ်သစ္စာရှိရင် စစ်တပ်ကို 'မပစ်ပါနဲ့' လို့ မိုက်ကရိုဖုန်းနဲ့ ပြောပေးပါ" ဆိုပြီး မိုက်ကရိုဖုန်း ထိုးပေးလိုက်တယ်။
သူက "ဖိုးဝင်းထိန်-ကိုယ်ဟာ စစ်တပ်က တပ်မတော် အရာရှိဖြစ်တယ်။ တပ်မတော်ကို သစ္စာဖောက်လို့ မဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်မပြော ဘူး"æတဲ့။
ဒီတော့ ကျွန်တော်က "ဗိုလ်မှူး ခင်ဗျားကလဲ တပ်မတော်ကို သစ္စာရှိတယ်။ ကျွန်တော်ကလဲ အလုပ်သမားတွေအပေါ်မှာ သစ္စာရှိတယ်။ ပြည်သူပေါ်မှာ သစ္စာရှိတယ်။ အဲဒီတော့ နှစ်ယောက်သေ သေကြတာပေါ့ တယောက် ကျည်ဆံ တတောင့်စီနဲ့" လို့ ပြောရင်းနဲ့ ပြန်ဆုတ်ခဲ့တယ်။
ဒီအချိန် ဦးမြဟန်နဲ့ ကိုကျော်ကြီးခင် လာပြောပြန်တယ်။ "စစ်တပ်က တက်လာပြီ၊ ကမ်းခြေက နေတက် လာတာဖြစ်တယ်။" တဲ့။ တချို့ရဲဘော်တွေကလဲ ဘာလုပ်ရမလဲ လာမေးကြတယ်။
"ဘာမှမလုပ်နဲ့၊ ဒီအတိုင်း တောင်းဆိုကြမယ်။ ဘာမှ မလုပ်နဲ့၊ ဘာကိုမှ မလုပ်နဲ့" လို့ အမိန့်ပေး လိုက်တယ်။
ဒီအချိန် ဖြတ်ကနဲ သတိရလိုက်တာရှိတယ်။ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ?။
ကျွန်တော့် လက်ထဲမှာ သင်္ဘောကျင်းတခုလုံးရဲ့ သော့တွေ ရှိတယ်။ ပါဝါစတေရှင် ကို ဖောက်ခွဲလို့ရ တယ်။ သင်္ဘောကျင်း ရေလုံကျင်းက ရေတွေ ဖောက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် သင်္ဘောတွေ ပျက်သွားနိုင်တယ်။ ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုန် ဖြစ်သွားမယ်၊ ဒီမှာ ရေတပ် စစ်သင်္ဘောတွေကလဲ ရှိနေတယ်။ သင်္ဘောကျင်း ပြာကျသွား အောင်လဲ လုပ်နိုင်တယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေလဲ ပြာကျတဲ့အထဲ ပါသွားနိုင်တယ်။ ဒီအချိန် ကွမ်းခြံ ရပ်ကွက်တခုလုံး စစ်တပ်က ဝိုင်းထားပြီးပြီ။ အခြေအနေတွေက အဲဒီလိုရှိတယ်။
ကိုကျော်ကြီးခင်က "နောက်မှာ ကွန်မင်ဒို တပ်တွေ ရောက်လာပြီ" လို့ သတိပေးတယ်။
"ကဲ ဗိုလ်မှူး ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ကျုပ်တို့ကတော့ အသေခံပြီး တိုက်ရတော့မယ်။ ဒီတော့..... "
ဗိုလ်မှူးရဲညွန့် လက်ကို လိမ်လိုက်ပြီး သူနဲ့အတူ ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ကွန်မင်ဒိုတပ် လာမယ့် နေရာကို ဦးတည်လိုက်တယ်။ ရှေ့ရောက်သွားတာနဲ့ စ ပစ်ပြီ။ "ဗိုလ်မှူး ရဲညွန့်ကို ပေး ပေး" လို့လဲ ပါးစပ်က အော်တောင်း တယ်။ "ဟေ့ အလုပ်သမားတွေ မင်းတို့ ဆန်မရဘူး၊ ဟောဒါပဲ ရမယ်ကွ" လို့လဲ ကြုံးဝါးတယ်။ ပြောပြော ပစ်ပစ် လုပ်ကြတယ်။ ဘက်နက် (လှံစွပ်) တွေနဲ့ တက်ထိုးတယ်။ ရဲဘော်တွေဟာ အထွေးလိုက် လဲကျကုန်တယ်။ တချို့ ရေကန်ထဲ ကျတယ်။
ဒီအချိန် ဗိုလ်မှူးရဲညွန့်က "ရဲညွန့်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပါပဲ" အော်ပြီး ရုန်းတယ်။ ကျွန်တော်ကလဲ လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်ထဲက ပါသွားတဲ့အခါ "ဟေ့ ရဲညွန့် ရပြီဟေ့" ပေါ့နော်။
မိုးက လင်းနေပါပြီ။ လမ်းပေါ်က သွေးတွေကတော့ စွေးစွေးနီနေပါတယ်။ သွေးခဲတွေ သွေးစီးကြောင်း တွေ.........။
ရဲဘော်တချို့ G3 ကျည်ဆံ ဖောက်ထွက်သွားလို့ ခြေထောက်မှာ အပေါက်တွေနဲ့။
ရဲဘော် သန်းအောင် ဆိုရင် ပါးစပ်ကြီး ပြတ်ထွက်သွားပြီး လျှာဟာ ကတ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ထားသလိုပဲ။
သယ်နိုင်သလောက် ရဲဘော်တွေကို ပွေ့ပွေ့ပြီးတော့ ဆေးခန်းထဲ သွင်းရတယ်။ ဒေါက်တာ စီစီကလဲ မျက်ရည်တွေနဲ့ ငိုနေရှာတယ်။ ဒေါက်တာ စီစီနဲ့ တင်တင်မူတို့ တော်ရှာပါတယ်။ လူနာ ရဲဘော်တွေကို ဆေးထိုး ပေး၊ ပတ္တီးစည်းပေး ပါတယ်။
ဒဏ်ရာရ ရဲဘော်တွေဆိုတာ အများကြီး ကုတင်ပေါ်မှာ မဆန့်လို့ ကြမ်းခင်းပေါ် မှာ ချထားရတယ်။
ရဲဘော် တင်မောင်- သူ စကားမပြောနိုင်တော့ဘူး၊ သူက မီးသတ်စက်ကို နှိုးနေတုန်း နောက်ကနေ G3 နဲ့ပစ်လို့ စအိုထဲ ကျည်ဆံဝင်သွားတယ်။ သူ့နားသွားတော့ - မရတော့ဘူးပေါ့နော်၊ လက်ခါပြတယ်။ အလားတူ ရဲဘော်သန်းအောင်ကလဲ ခေါင်း, ခါ ပြရှာတယ်။ ရဲဘော်ဘဖူး ကတော့ နားထင်ကို လှံစွပ်နဲ့အထိုးခံထားရလို့ ပါးစပ်က သွေးတွေ ဗွက်ခနဲ ဗွက်ခနဲ အန်ကျနေပါတယ်။ ဒီလိုလျှောက်ကြည့် အားပေးနေစဉ် ရဲဘော်တွေက ကျွန်တော့်ကို ပြေးခိုင်းနေကြတယ်။
ကျွန်တော်က "ရဲဘော်တို့ ကျွန်တော် ရဲဘော်တို့နဲ့ အတူ အသေခံမယ်။ ပြဿနာတွေ ကျွန်တော်ရှင်းမယ်။ ဘယ်တော့မှ ရဲဘော်တို့ကိုမစွန့်ခွာဘူး၊ အဲဒီတော့ ရဲဘော်တို့နဲ့ အတူ ကျွန်တော်ရှိမယ်။ ကြိုးစင်ကို ကျွန်တော်တက်သွားမယ်။ ရဲဘော်တို့အပေါ်မှာ ထာဝစဉ် သစ္စာရှိမယ်။ ရဲဘော်တို့ကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ဘူး" လို့ ပြောနေချိန်မှာပဲ......
စစ်တပ်က ကက်ပတိန်တယောက် အခန်းထဲ ရောက်လာပြီး "ဟေ့ ဝင်းထိန်" ဆိုပြီးတော့ G3 နဲ့ လှမ်းထောက်ထားတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို လက်မြှောက်ခိုင်းပြီး အပြင်ကို ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ သပိတ် လမ်းမကြီးမှာ သွေးတွေ...... သွေးခဲတွေ အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီလမ်းပေါ်မှာ ကွန်မင်ဒို ဗိုလ်ကြီး ဖြစ်သူက ကျွန်တော့်ကို ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ခိုင်းတယ်။
"မင်း ငါ့ကို ပစ်ချင်ပစ်လေ၊ ငါကတော့ ထိုင်စရာ မလိုဘူး၊ ငါ တရားခံ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းတို့ တရားခံပဲ၊ ပစ်လိုက်စမ်းပါ။" ပြောမှ ဒီကောင်က ကျွန်တော့်ကို ဦးချစ်ဦးတို့ ဦးအုန်းမောင်တို့ ဦးထွန်းရီတို့ကို ကျွန်တော် ချုပ်ထားတဲ့ အခန်းထဲ ပြန်ထည့်တယ်။ ဦးချစ်ဦးက ကျွန်တော့်ဆီက သော့တွေ တောင်းတယ်။ သူက "ရဲဘော်တွေတော့ အတော်များများ ကျကုန်ပြီ.. ကိုဝင်းထိန်" လို့လဲ ပြောတယ်။ သူ့ကို သော့ အားလုံးပေးလိုက် ပါတယ်။
မိုးအတော်လင်းနေပြီ၊ ကွန်မင်ဒို တပ်သားတွေ လက်နက်မျိုးစုံ အီကွစ်မင့်မျိုးစုံနဲ့ ကမ်းနားပေါ်က တက်လာပြီး သင်္ဘောကျင်း လမ်းကြီးကို ဖွင့်ချပစ်လိုက်တယ်။ နောက် မိန်းဂိတ်ကြီးကို ဖွင့်ပြန်တယ်။ ဒီအချိန် တိုင်းမှူးလို့ ယူဆရသူ တယောက် မာစီဒီးကားကြီးနဲ့ သင်္ဘောကျင်းထဲ ဝင်ရောက်လာတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ သွေးတွေပေါ် နင်းပြီး စစ်သားတွေက သွားလာနေကြတယ်။
၇ နာရီလောက်မှာ အလုပ်သမားတိုက်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့၊ ကျွန်တော့်ကိုတော့ ဘားလမ်းကို ခေါ်သွားပါတယ်။ အဲဒီကမှ အင်းစိန်ထောင်။